Woopra: Ezigbo oge, Nyocha ahịa Ahịa | Martech Zone
Woopra: Ezigbo oge, Nyocha ndị Ahịa
Satọde, Satọdee 21, 2013 Satọde, Satọdee 21, 2013 Douglas Karr
Woopra bụ nchịkọta ikpo okwu nke na-elekwasị anya n'atụmanya gị na ndị ahịa gị, ọ bụghị nyocha peeji. Ọ bụ ihe a ukwuu customizable nchịkọta ikpo okwu nke na-elekwasị anya na mmekọrịta ndị ahịa na saịtị gị - ọ bụghị naanị ụzọ ha na-esi. Nghọta a nyere nwere ike inye gị ohere iji ezigbo oge data rụọ ọrụ oge.
Ụfọdụ n'ime Nke Woopra atụmatụ ntanetị pụrụ iche:
Nkọwapụta Ndị Ahịa - Chọpụta ndị ahịa gị site na email ma gbakwunye aha ha na profaịlụ ha. Gwakọta data ndị ahịa ozugbo na profaịlụ Woopra iji hazie ha maka azụmahịa gị. Jide data dịka ọkwa akaụntụ onye ọrụ, akụkọ ihe mere eme, ma ọ bụ data ndị ahịa ndị ọzọ. Teknụzụ Woopra na-ahụkwa ndị ahịa n'ofe ọtụtụ ngwaọrụ. Ebe ọ bụ na ọ bụ ezigbo oge, ị ga-ahụ ndị nọ na saịtị gị ugbu a.
Akpaghị aka na Akụkọ Omenala - A na-emepụta akụkọ na-akpaghị aka dabere na data ị na-eso. Woopra ga - eweputa nzụta ego ma ọ bụ akụkọ ndị ahịa na - achịkọta site na ụbọchị, izu, ọnwa, edemede, SKUs, ngalaba ma ọ bụ ọrụ ị gbakwunye ndị ahịa gị.
Ihe ntụgharị ntughari - Nkọwapụta ihe ndị dị mkpa na usoro ntugharị gị wee chọpụta ọkwa ndị ahịa gị na-agbahapụ. Mara oge ole ndị ahịa ga-anọ n’agbata ebum n’uche ọ bụla, chọpụta ngalaba ntụgharị gị kacha mma na nke kacha njọ ma tụnyere ọnụego mgbanwe ndị ahịa site na nkebi ma ọ bụ ọrụ.
Njide Ndị Ahịa - Tulee otu ị si ejidesi otu dị iche iche nke ndị ahịa malitere iji ngwaahịa gị n'otu oge (ụbọchị, izu, ma ọ bụ ọnwa). Nke a na - enye gị ohere ịhụ mgbanwe mgbanwe na ngwaahịa gị ma ọ bụ onyinye gị nwere na ndị ahịa gị.
Ihe omume na-akpali - Zipu ozi email, melite profaịlụ nke ndi ahia gi ma obu tinye ihe ndi ozo na Woopra's Webhooks.
Hụ onwe gị ihe kpatara ụlọ ọrụ 3,000 ji ahọrọ Woopra. Malite a free ụbọchị 30 ikpe ma ọ bụ ịtọọ oge a ngosi na ha. Enweghị kaadị akwụmụgwọ, enweghị ọrụ.
Tags: Analyticsakakabaredentughari ntugharintughari ntughariahịa nchịkọtanjigide ndị ahịaahịa nkewaahịa nsusomkpumkpu akụkọfoneelu na-akọnjide njide
Ọkt 1, 2013 na 7:13 PM
Ndewo, daalụ maka post.
Ọ bụrụ n ’ị ga - akpọ aha ndị asọmpi 3 na Woopra, kedụ ndị ha ga - abụ?
Mar 3, 2015 na 3: 34 PM
Daalụ maka nyocha. Echere m na Woopra, ya na nyocha ya nke ọma, bụ nnukwu ihe ọzọ na nchịkọta Google. M na - ejikọkwa ya na nchịkọta nke livechat m, Visitlead, nke mere na ọ dịrị m mfe ịchọta mmekọ. Ihe kachasị mma bụ na ọ dịghị mkpa ijikọ ya, ihe niile dị mkpa gafere Woopra ozugbo. https://visitlead.com/plugins/analytics-woopra/